Ungathenga kanjani amagugu angokwemvelo e-Siem Reap?
I-22 Dec 2017
amatshe angokwemvelo, Siem Reap
Uma uxhumanisa leli khasi, kungase kube sekwephuzile kakhulu.
Ngaphambi kokuthenga amatshe amatshe noma ubucwebe e-Siem Reap, kubalulekile ukufunda ulwazi ngezansi.
I-Siem Reap ingenye yezindawo emhlabeni lapho kukhona khona amatshe okugwedla kakhulu.
Njenganoma yiziphi izindawo zokuvakasha, cishe yonke into iyinkohliso. Kunomthamo omkhulu wemali ovela kubavakashi ngezinkampani ezikhohlisayo, wazi kahle ukuthi lezi zivakashi ngeke zibuyele ukukhononda, uma sezibuyele ezweni lakubo.
I-scam scam iyadingeka amashumi ezinkulungwane zamaRandi ngosuku ngenkathi ephansi yezivakashi, kanye nezinkulungwane ezingamakhulu ayizinkulungwane zamaRandi ngosuku ngenkathi ephakeme, kusukela ngoNovemba kuya ku-Mashi.
Lena yindlela engcono kakhulu yokweba imali kubavakashi, ngaphandle kobudlova nokumomotheka.
Uma unenhlanhla, abantu ngeke bazame ukukopela, kodwa cishe bonke abantu obacela iseluleko bayingxenye yale mafia amakhulu. Ngakho-ke ungathembi muntu: umhlahlandlela wokuvakasha, i-hotel receptionist, umshayeli webhasi, umshayeli wetekisi ...
Nsuku zonke sibona abantu beza esikhungweni sezemvelo, abaqaphela ukuthi sebeqedile. Baza ukuhlola amatshe abo amatshe emabhulothri wethu ngemva kokuthola ikheli lethu ku-Google, kodwa sekuvele sekuphuzile. Kusukela lapho ikhasimende liphuma esitolo, seliphelile. Akukho ukubuyiselwa imali.
Asikwazi ukubala ukuthi kaningi kangakanani sabona abesifazane bekhala lapho beqaphela ukuthi basebenzise amakhulu noma izinkulungwane zamaRandi ngamatshe amatshe angamaqiniso
Ngempela, kunezitolo eziningi zamatshe ezimatshe, ezihlanganyela izinzuzo nazo zonke izikhulu, i-hotel receptionist, umshayeli, umhlahlandlela, njll. Laba bangabanikazi banikela ku-50% yentengo yokuthengisa kumathwali abo
Kulula kakhulu ukutshela izivakashi nganoma yini ngoba ayayiqondi ulimi lwendawo, futhi zihanjiswe ukumomotheka nomusa wabangane babo abasha.
Uma ubuza umxhumanisi ukuthi axhumane nathi ukubhuka, nasi ezinye zezibonelo zalokho abazokuphendula: (lezi yiziqinisekiso ezivela kumakhasimende ethu)
- "Ngizame ukushayela ucingo, kodwa le esitolo ivaliwe"
Empeleni, akulungile! Sivulekile unyaka wonke. Izinsuku ze-7 ngesonto, i-9 ngingu-10 ntambama
- "Lesi sititolo sithengisa amagugu amanga, kodwa nginomngane onesitolo, ngimazi iminyaka engu-20, ungamethemba. "
Empeleni, akulungile! Sithengisa amagugu angokwemvelo kuphela, futhi yibo kuphela!
- "Kude kakhulu nehhotela lakho, kukhona okungcono futhi okude kakhulu"
Empeleni, akulungile! Sitholakala edolobheni lase-Siem Reap
- "Lesi sitolo asisekho, bavala, kodwa ngiyazi isitolo esihle, uma uthanda, ngizokushayela khona"
Bangaya kude kakhulu ekuqamba amanga nokuxhaphaza. Bangakugcina ulinde izinsuku, uze uqede futhi uvumele ukuya kwesinye isitolo ngomzuzwana wokugcina, nje ngaphambi kokuba uhambe. Nakhoke ! Ekugcineni ususwe!
Yingakho kubalulekile ukuzibhalela wena ngokwakho. Ngakho, uzoba ngu-100% ephephile. Sinikeza ukuhamba mahhala kusuka ehhotela lakho. (Uhambo olujikelezayo)
Unganqikazi ukuxhumana nathi. Akekho ongakwenza okungcono kunakho. Sikhuluma isiNgisi, isiFulentshi, isiKhmer ...
- Ihhovisi lekholi: + 855 63 968 298
- Ifoni yeselula / Whatsapp / Line / WeChat: + 855 92 615 288
- I-Facebook Messenger: I-Gemological Institute yaseCambodia
- I-imeyili: [Email protected] (siphendula esikhathini esifushane kakhulu)
Uma usufuna ukuthenga igugu kusuka kwesinye isitolo ngoba uqinisekile ukuthi uyigugu langempela, cela isitifiketi. Ukuze wazi ukuthi isitifiketi sangempela kufanele senziwe ngumjozi wezinyanga ezifundela iziqu, ku-laboratory yezemvelo. Noma yisiphi esinye isitifiketi kuyinkohliso
Uma isitolo ku-Siem Reap sitshela ukuthi sinokubambisana ndawonye, ​​akulungile. Asinabalingani. Lokhu akulona ukuthi lesi sitolo sinesitifiketi esisodwa noma ezimbili esikhishwe yi-laboratory yethu esho ukuthi izinkulungwane zamanye amatshe angamatshe athengiswa kulesi sitolo zingokoqobo. Kulungile ukugunyaza amanye amatshe amatshe abonisa wena izitifiketi zethu. Uma amanye amatshe ayigugu ayengempela, bebengabe beqinisekisiwe ngamunye.
Ayikho isitolo lesigugu samatshe ku-TripAdvisor esigabeni esithi "Ukuthengwa" ku-Siem Reap ngaphandle kweyethu. Zibuze umbuzo: ngani? Ukuze uthole impendulo, konke okumele ukwenze ukuqonda ukuthi zonke izitolo zamatje ziceliwe TripAdvisor ukususa ikhasi labo ngoba bathole kuphela izikhalazo mayelana nokukhwabanisa.
Yazi ukuthi asizami ukulimaza abathengisi bezimpawu zamatshe. Akuzona zonke ukungathembeki, abanye bacabange ngobuqotho ngokuthengisa amatshe angempela, ngaphandle kokwazi ukuthi lawo magugu ayigugu noma aphathwa. Kodwa ekugcineni, umphumela uyafana nekhasimende
Manje kuyatholakala: Gemstones wholesale
Ukuqhuma kwe-Hawaii sikaKalauea akuzange kuvethe amatshe amatshe avela esibhakabhakeni
Mayelana Post Umbhali
iqoqo elisha legugu
Iso lesikhumba kornerupine
24 Septhemba 2018
I-Cat's iso danburite
I-cat's eye aquamarine
I-pezzotite ye-cat yeso
23 Septhemba 2018
I-Cat's eye diaspore
21 Septhemba 2018